Ohabolana Malagasy - MAMPIERITRERITRA...
Nanao fivoriambe niantsoana ny miaramilany sy ny anjeliny rehetra satana. ny fifanarahana nataon'izy ireo dia trangan-javatra nisy marina tokoa ka meteza hamaky sy handinika tsara ary aoka tsy ho voafandrika.
Tamin’ny kabary fanokafana dia hoy Satana tamin’ny ireo anjely mpiodina :
"Tsy azontsika sakanana tsy ho any am-piangonana intsony ny Kristiana"
"Tsy azontsika sakanana tsy hamaky Baiboly hamantatra ny fahamarinana izy ireo"
"Tsy ho azontsika atao intsony ny hisakana azy tsy hiroso amin’ny firaisana amin’ny Jesosy kristy"
"Koa raha tanteraka ny firaisany amin’ny Jesosy Kristy dia ho rava ny fahefantsika aminy"
"Avelao ihany izy hizotra amin’ny fiainana mahazatra azy, fa hangalarintsika kosa ny fotoana eo aminy mba hisakanana azy tsy hanam-piraisana intsony amin’ny Jesosy Kristy"
"Izany no ataovy sy tanteraho ry anjely mpiodina, ataovy izay hahatonga ny kristiana ho variana sy sondriana, ary sakano tsy hiantsampy amin’ny Mpamonjiny mba hampandamoka ny firaisany Aminy eo amin’ny fiainany andavan'andro"
Dia namaly ireo anjelin'i Satana ka nanao hoe : "amin’ny fomba ahoana no ahazoana manatanteraka izany?"
Dia hoy Satana :
1 - Hazony izy ireo (ny Kristiana) ho variana amin’ny zavatra tsy dia misy dikany loatra eo amin’ny fiainany ka mamorona zavatra hampifantoka ny saina aman'eritreriny;
2 - Tariho hanao fandaniana (dépenses) tsy an-kijanona mba hisambo-bola tsy ho afa-trosa mihitsy;
3 - Reseo lahatra mba hiasa mafy ny olona, tsy hanam-potoana intsony, ka samy hikarataka ny mpivady hanatrarany ny nofinofiny amin’ny rendrarendra ety ivelany.
4 - Sakano tsy hanam-potoana hiarahana sy hiresahana amin’ny zanany sy ny fianakaviany ny olona. Ny trano fonenany dia ho tonga toeram-piefenana ialàna amin’ny asa (toeram-patoriana fotsiny);
5 - Korontano ny sainy tsy handre intsony ny bitsiky ny Fanahy Masina. Ny vesatry ny harerahana eo aminy no tsimaintsy mahatonga azy ho mora tohina sy tezitra amin’ny zavatra tsy misy dikany indrindra .
6 - Ataovy izay hahatonga azy handefa tsy ankijanona ny radio, ny K7, ny CD, télé, ordinateur amin’ny fotoana sy ny toerana rehetra (trano, fiara...) ka hahavariana azy amin’ny zavatra tsy misy antony.
7 - Ataovy mibahan-toerana eo amin’ny fiainany ny mozika sy ny hiran'izao tontolo izao, ka fenoy azy ny fiara, ny toeram-piavarotana ary ny toeram-pisakafoanana rehetra mba hanapaka ny fifandraisany amin’ny Jesosy Kristy sady hanadinoany ny tonon-kiram-panahy mba hahavery azy.
8 - Fenoy zava-mahatsikaiky sy doka-barotra mahavariana ny gazety sy ny làlana rehetra. Ny vaovaon'izao tontolo izao no ataovy mamenony fony mandritra ny 24 amin’ny 24 ora mba tsy hahenony intsony ny amin’ny Jesosy Kristy sy ny famonjeny.
9 - Ampitomboy ny filan'ny maso eo aminy mba hampifantoka azy amin’ny lamaody sy ny fitafiana tsy maotina, ho sodokan'ny endrika ety ivelany hamono miandalana ny fitiavana eo amin’ny mpivady hitarika amin’ny faharavan'ny tokantranony, hampitombo ny fijangajangana.
10 - Aza avela handinika ny hatsaran'ny zava-boaharin'Andriamanitra mihitsy izy fa hazony amin’ny fandaniana andro amin’ny fijerena sarimihetsika sy fampisehoana arahina mozika feno kotaba ary fanatanjahatena mba ho raiki-tampisaka ao an-tsainy sy tsy afaka am-bavany mandritra ny andro izany ka hanadinoany an'Andriamanitra.
11 - Hazony ho be raharaha hatrany hatrany izy ireo mba hitaraina lava ho tsy manam-potoana, tsy handinihina Soratra Masina intsony.
12 - Rehefa manao fihaonana handinika zavatra ara-panahy izy dia lanio fotoana amin’ny resabe mba hikorontan-tsaina ka tsy hahavita na inona na inona.
13 - Ny fikasana rehetra ao aminy dia ampidiro olana sy zavatra hafa tsy hahatanteraka ny fitokisany amin’ny Andriamanitra. Avelao izy hatoky tena ka hikaroka vahaolana samirery ka hanao sorona ny fahasalamany sy ny fianakaviany amin’ny tanjona tiany ho tratrarina.
"Ho hitanareo fa tsy maintsy ary tsy maintsy mahomby izany tetika izany...."
Dia lasa tokoa ireo anjely mpiodina hamita faingana ny iraka (mission) nifanarahany mba hisintonana ny Kristiana, hanan-draharaha (occupé) lalan-dava, mandeha tsy an-kijanona, maika sy dodona lava hatrany amin’ny fotoana rehetra sy ny toerana rehetra hatrany am-Piangonana aza, ka tsy manam-potoana intsony hivavahana sy hiresahana amin’ny Andriamanitra, handinihina Soratra Masina, handinihin-tena.
NY FANONTANIANA DIA NY HOE : Nahatanteraka an'ireo iraka (mission) nampanaovina azy teo amin’ny fiainako tokoa ve ny Devoly ? Anjaran'ny tsirairay ny mandinin-tena ny amin’ny izany
Commentaire de Elvis Roberts, 22/05/2020, 13 01 19 (UTC):
Commentaire de Adrian Bayford, 25/07/2019, 01 01 55 (UTC):
Mila trosa amin'ny tanjona rehetra ve ianao? Tetibola fampindramam-bola amin'ny banky miaraka amin'ny tahan'ny zanabola. Ny fampindramam-bola antsika dia mora sy haingana. Mifandraisa aminay androany mba hahazoana ny trosa ilainao. Azontsika atao ny mifanandrify amin'ny fampindramam-bola amin'ny tomban'ny 2% amin'ny tetibola. Raha liana ianao, mifandraisa aminay avy hatrany (adrianbay0008@gmail.com)
Commentaire de Genuine Provider for BG/SBLC(Bank Guarantee/Standby Letter of Credit), 18/07/2019, 13 01 10 (UTC):
Commentaire de MR PENDELIS, 25/05/2019, 07 07 35 (UTC):
Benötigen Sie eine echte und zuverlässige Kredithilfe und möchten Sie kein Betrugsopfer sein? Ich denke, das ist für Sie. Dies ist ein Zeugnis dafür, wie, ich wurde von einem Idioten verarscht, der sich selbst Kreditgeber nennt und wie Meine finanzielle Freiheit habe ich schließlich durch einen von Gott gesandten Helfer erlangt, der meinem Leben endlich einen Sinn gegeben hat, mit den niedrigsten Zinssätzen für 2% Zinsen und wenig TOKEN für andere Anforderungen, und sie spielen für Ihre Kreditwürdigkeit keine Rolle… Weitere Informationen Wenn Sie wissen möchten, wie Sie diesen großartigen Mann erreichen können, schreiben Sie ihm einfach eine E-Mail und sagen Sie ihm, dass Herr Barry Ways im Internet über ihn aussagt. Kontaktieren Sie ihn unter: pwloancompany484@gmail.com FAMILIE, weil er ein endloses Lächeln auf meine Gesichter zaubert und heute 100% SCHULDENFREI ist.
Commentaire de Lisa Donald , 15/05/2019, 10 10 24 (UTC):
Heeft u een lening nodig die wij momenteel aanbieden: persoonlijke, zakelijke en persoonlijke lening * Zakelijke lening * Betaaldaglening * Studielening Hypothecaire lening * Autoleningen * Slecht krediet Lening * Eigen vermogen Lening * Project / contractlening * Consolidatie van schulden Lening aan geïnteresseerde personen tegen 3% rentetarieven. Solliciteer bij ons via e-mail: lisadonaldloancompany000001@gmail.com WhatsApp: +18687086372 Dankjewe
Commentaire de Muhammed Emir Harun, 10/04/2019, 09 09 09 (UTC):
Commentaire de Raymond Doison, 04/04/2019, 10 10 24 (UTC):
Commentaire de Elena, 04/04/2019, 05 05 36 (UTC):
Fitiavana ny trosa.
Ianao amin'ny olana ara-bola rehetra? Te-hanomboka ny orinasanao ve ianao? Io orinasa mpanao hosoka io dia nametraka fikambanana mpiaro ny zon'olombelona manerana izao tontolo izao miaraka amin'ny tanjona tokana hanampiana ny mahantra sy ny olona manana olana ara-bola eo amin'ny fiainana. Raha te hampihatra ny fangatahana ianao dia avereno aty aminay ny antsipiriany etsy ambany etsy ambany: elenanino0007@gmail.com
Vola be trosa:
Misaotra anao ary mitahy Andriamanitra
Commentaire de WALSH ROBERT, 15/02/2019, 17 05 38 (UTC):
Commentaire de Raymond Doison, 20/11/2018, 11 11 34 (UTC):
Déjà 328969 visiteurs (905658 hits) aujourd'hui